တရုတ် ထပ် သတိပေးပြီ - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | April 3, 2021 | knowledge | No Comments
မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပါဝင် ပတ်သက်နေသူများ အနေဖြင့် အခြေအနေများ ယခုထက် ပိုဆိုးလာမည့် အရေးကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဆွေးနွေးပွဲ အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်ကြဖို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ဟွာ ချွမ်ယင်မှ ယနေ့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာနယ်ခြား မူဆယ်တဖက်ခြမ်းတွင် တရုတ်တပ်များ စုရုံးရောက်ရှိနေသည် ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ် လာချိန်တွင် ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအတွင်း သွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း အတွက် လွန်စွာ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေရပြီး မိမိတို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရရှိထားသည့် ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ ဆက်လက် အကောင် အထည် ဖေါ်သွားဖို့ လိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း အနေနှင့် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ဖက်စလုံး အနေနှင့် ပြည်ပ စွက်ဖက်မှု ရှိလာမည်ကို မျှော်လင့်စောင့်စား၍ မနေကြရန် ရည်ညွှန်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပုံရပြီး မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်း ဆီရီးယားလို ရုရှား ရောက်လာမည်ဟု ထင်မနေရန် သတိပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များမှ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် လူထု အရေးတော်ပုံ ကြီးတွင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပါဝင်လာနေပြီ ဖြစ်၍ တရုတ် အနေဖြင့် ၎င်းတို့ အကျိုးစီးပွားများ ထိခိုက် ပျက်စီးတော့မည့် အရေးကို အလေးအနက် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်လာပုံ ရှိသည်။
ယမန်နေ့ကပင် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်တော် ကေအိုင်အေ မှ ဖားကန့်ရှိ ယုဇနပိုင် စက်ရုံတရုံကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးလိုက်ပြန်သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် ဒေသခံ တို့၏ မြေများ သိမ်းယူထားခဲ့မှု အပေါ် ကာလကြာမြင့်စွာ အငြင်းပွားနေခဲ့သည်။
CRPH မှလည်း မိမိတို့သည်သာ နိုင်ငံကို အနာဂတ်တွင် ဦးဆောင်သွားမည့် အင်အားစု ဖြစ်သည်ကို တိုင်းရင်းသား များအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အသိပေးထားရန် လိုအပ်နေသည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်သည် အကြီးအကျယ် ဖိအားပေးခံနေရသည့်အတွက် အလားတူ ကြေညာချက်မျိုး ကို သဘောတူခဲ့ရပြီး စစ်တပ်မှ အခြေအနေများ ဒီထက် ဆိုးအောင် ပြုလုပ်လာပါက မည်သို့မျှ အကာအကွယ် ပေးတော့မည် မဟုတ်ဆိုသည်ကို ကမ္ဘာအား အသိပေးလိုပုံရသည်။ တရုတ်သည် မြန်မာ အပေါ် ရပ်တည်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးအကျယ် နာမည် ပျက်နေရသည်။
အမေရိကန် ရှိ မြန်မာ ပြည်သားများကလည်း လော့စ်အိန်ဂျဲလိစ် ရှိ တရုတ် ကောင်စစ်ဝန် ရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြခဲ့ ခြင်းဖြင့် ကျန်သော နိုင်ငံရှိ မြန်မာများကိုလည်း ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် နမူနာ ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။
စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် နယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးသွားသူများ ပြန်လာကြရန် ယခင် ငြိမ်ပိ လမ်းစဉ်အတိုင်း ဖိတ် ခေါ် လာပြန်သည်။ CNN သတင်းထောက် နှင့် အင်တာဗျူး ခံခဲ့သည့် နိုင်ငံသားများကိုပင် ချက်ခြင်းလို ဖမ်းဆီး ခံနေရသည် အဖြစ် ရှိနေပါလျှက်နှင့် ယခုလို ကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည်က ပျက်လုံး ထုတ်နေ သလား ဟုပင် ထင်မှတ်ရသည်။
မင်းအောင်လှိုင်မှာ သူသည် အကြင်နာတရားရှိပြီး မည်မျှ အထိ ချုပ်တည်းခဲ့သည် ဆိုသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် CNN သတင်းဌာနအား ဖိတ်ခေါ် ခဲ့သော်လည်း ယခုလို အင်တာဗျူးခံရသူများ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည်ကပင် စစ်တပ်အတွင်း အယောင်ယောင် အမှားမှား နှင့် ဆင်ခြင်ဉာဏ် မဲ့နေမှုကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ပြန်သည်။
မင်းအောင်လှိုင် က လမ်းပေါ်တွင် လူမရှိအောင် လုပ်နိုင်သူများကို ရာထူးတိုး ဆုလဒ်များ ပေးမည်၊ မလုပ်နိုင်က ရှေ့တန်းပို့မည် ဆိုသော အပြောများကြောင့် သူ့ထက်ငါ အကြမ်းဖက် ကာ နှိမ်နှင်းနေကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပုံရ သည်။ ၎င်းတို့ စိတ်ထဲတွင် ခေါင်းဆောင် လုပ်သူများကို ဖမ်းဆီးနိုင်လျှင် ကိစ္စပြတ်ပြီဟု ယူဆနေကာ ဒလန်များ သုံးပြီး တရကြမ်း ဖမ်းဆီးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒလန် လုပ်သူများ၊ အာဏာရှင်များ နှင့် ပူးပေါင်းသွားသူများ မည်သူမည်ဝါ ဆိုသည်ကို လူထု က သိထားပြီး ဖြစ်၍ မင်းအောင်လှိုင် အဖွဲ့ အရေးနိမ့်သွားလျှင်သွားချင်း မြို့နယ် ရပ်ကွက်များတွင် လက်စားချေ အကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်တိုက်လို ဖြစ်ပွားလာမည့် အရေးကို စိုးရိမ်စရာဖြစ် လာနေပြန်သည်။ အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် လမ်းပေါ်က လူများကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီဟု ယူဆလာခဲ့လျှင် ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့် ဆက်ပြီး တငွေ့ငွေ့လောင်နေမည့် အရေးကို ငြိမ်းသတ်ရန် အိမ်ထဲရှိ လူများကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးလာမည်ကား အသေအချာပင်။ တတိယ အဆင့် အဖြစ် စီဒီအမ် လုပ်သည့် ဝန်ထမ်းများ ပြန်လာမည် ဆိုလျှင် ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ထိုး၊ အလုပ်ထုတ်၊ နယ်ပြောင်း၊ ချောင်ထိုး၊ ရုံးသန့်ရှင်းရေး လုပ်ခိုင်း အစရှိသည့် နည်းမျိုးစုံ ဖြင့် နှိပ်စက်ကြမည်သာ ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို မည်သို့မျှ အသက်ရှူခွင့် ပေး၍ မဖြစ်၊ ရသည့်နည်းဖြင့် ခုခံသွားရမည်က တမျိုးသားလုံး၏ အသက်အိုးအိမ် ဂုဏ်သိက္ခာ တရားအတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးသော အမျိုးသားရေး တာဝန်ကြီး ဖြစ်လာနေပေပြီ။
ထိုသို့သော အနေအထားများကြောင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် မြန်မာကို မူလ အနေအထားသို့ ပြန်ရောက် သွားနိုင်သည် ဆိုသော အလားအလာမှာ လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် စစ်အာ ဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ပဲ အသိအမှတ် ပြုမည်လော၊ ၎င်းတို့ ကျဆုံးခန်း ရောက်သည်အထိ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မည်လော၊ ဆိုသည်အနက် တခုခုကို ရွေးချယ်ရပေတော့မည်။ လူထုကလည်း နိုင်ငံတကာ မှ ဝင်ရောက် ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်များ မှေးမှိန်လာသည်နှင့် အမျှ ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်ကြီး ဖြင့်သာ စစ်တပ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်တော့မည် ဟု ခံယူလာကြပြီ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ကုလ၏ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး လင်ဒါ သောမတ်စ် ဂရင်းဖီးလ်က မြန်မာ စစ်တပ်မှ လိုက်လျော မှုများ ပြုလုပ်ပြီး အကြမ်းဖက်နေမှုများ မရပ်တန့်က မိမိတို့ဖက်မှ ယခုထက် ပိုပြီး မည်သို့ ထပ်၍လုပ်ရမည့် နည်းလမ်းများကို မဖြစ်မနေ ရှာဖွေရတော့မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ မည်သို့မည်ပုံ လုပ်ရမည် ဆိုသည်များကလည်း မိမိတို့ ထံတွင် အဆင်သင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူမစကား အတိုင်း ပြန်ပြောရလျှင် All measures are at our disposal. ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် သံတမန် စကားအရ ဆိုရလျှင် Military option is not ruled out. ဆိုသည့် စကားအောက် တဆင့်သာ နိမ့်ပေတော့သည်။
ကုလ သမဂ္ဂ အနေဖြင့် No-Fly Zone ကို အလွယ်တကူ သတ်မှတ်ပေး၍ကား မရပြန်၊ အကယ်၍ မလိုက်နာက စစ်ရေးအရ တခါတည်း အရေးယူရတော့မည့် သဘောရှိလာနေသည်။ တရုတ်ဖက်ကလည်း မြန်မာကို ဆီရီးယားလို အဖြစ်မခံနိုင်၍ ၎င်းတို့ဖက်က ဦးအောင် ဝင်ရောက်ပြီး အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ နည်းလမ်းသာ ရှိတော့သည်။
အာဏာသိမ်း အဖွဲ့၏ မအောင်မြင်သော လုပ်ရပ်များကြောင့် ဒေသတွင်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်လာမည့် အရေးကို အာဆီယံ နိုင်ငံများက လည်း စိုးရိမ်လာနေကြလေသည်။
မြို့နယ်များတွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ပြည်သူများမှ ရသည့် နည်းလမ်း ပေါင်းစုံဖြင့် ဆက်လက် တွန်းလှန်လျှက် ရှိနေသည်။ ယင်းမာပင် နယ်သားများဆိုက လုပ်သေနတ်များနှင့်ပင် အာဏာသိမ်း တပ်များကို ခုခံ ရင်ဆိုင်လာခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ မိမိတို့ထက် အင်အား အဆပေါင်းများစွာ သာသည့် ရန်သူကို ဒူးမထောက် လက်မမြှောက်ဘဲ ခုခံနေကြ ခြင်းကပင် ၎င်းတို့ အပေါ် ပြည်သူများက မည်မျှထိ ရွံရှာ မုန်းတီးနေကြသည် ဆိုသည်ကို ပြဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေသတွင်းရှိ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများကလည်း အမေရိကန် နှင့် အီးယူ တို့မှ အတူ တွဲကာ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ ကြီးနှစ်ခုနှင့် ယင်း၏ လက်ခွဲ ကုမ္ပဏီ ၁၃၃ ခုကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှု လုပ်ခဲ့ခြင်း အတွက် မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ နှင့် မပတ်သက်သော်လည်း ဂယက် ရိုက်ခံ ရမည်ကို ထိတ်လန့်နေကြသည်ဟု သတင်းများက ဆိုသည်။ ပြဿနာ ဖြစ်လာရသည်မှာ နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းကာ ဒဏ်ခတ်ခံထားရသည့် ကုမ္ပဏီ များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုက်ရိုက် သော်၎င်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်း ပတ်သက်နေသူများ၏ ဒေါ်လာဖြင့် ငွေပေးငွေယူ ကိစ္စများ ထိခိုက်လာမည့် အရေးပင် ဖြစ်သည်။
ထိုကိစ္စအပေါ် ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက ဥပမာပေး ခဲ့ရာတွင် မြန်မာရှိ ကုမ္ပဏီ ငွေစာရင်းမှ နာမည်ပျက် စာရင်း တွင် ပါရှိသည့် ကုမ္ပဏီ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦး ထံ ပို့ဆောင်ပေးသည့် ကုန်စည်များ အတွက် ငွေပေးချေရန် စင်္ကာပူရှိ ကုမ္ပဏီ၏ ငွေစာရင်းမှ လွှဲပြောင်းပေးရာတွင် အမေရိကန် အာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့၏ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ မှုများကို ဖေါက်ဖျက်သည်ဆိုကာ အဆိုပါ ငွေများကို သိမ်းဆည်းသွားမည့် အရေး နှင့် ကနေဒါတွင် ဖမ်းဆီး ခံရသည့် ဟွာဝေး ကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာရေး တာဝန်ခံ ကဲ့သို့ ကြမ္မာမျိုး ကြုံလာရမည့် အရေးတို့ ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် ငွေပေးချေမည့် လွှဲပြောင်းမှု မှန်သမျှ သည် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး နယ်ပယ်ကို ဖြတ်သန်းရစမြဲ ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေသည်က မြန်မာ ကုမ္ပဏီတခုမှ အမေရိကန် စက် အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း တခုကို ဥပမာ တရုတ် ကုမ္ပဏီထံမှ ဝယ်ယူခဲ့သည် ဆိုကလည်း ဝယ်သူရော ၊ ရောင်းသူပါ ဒဏ်ခတ်ခံရနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထိုကိစ္စ နှစ်ခု စလုံးသည် လိမ်လည် မှု ဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့် ရာဇဝတ်မှု များလည်း ဖြစ်နေပြန်သည်။
ထို့အတွက် ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အဖို့လည်း မိမိတို့ အချင်းချင်း ဘဏ်မှတဆင့် SWIFT wire transfer မှ ငွေလွှဲရာတွင်ပင် လွန်စွာ သတိကြီးစွာ ထားရမည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ စိုးဝင်း နှင့် နာမည်တူသူများ၊ မင်းအောင်လှိုင် ဆိုလျှင်လည်း အလယ် နာမည် ဖယ်ထားလေ့ရှိ၍ မင်းလှိုင်များ အစရှိသည်တို့ ကို ငွေလွှဲမည်ဆိုလျှင် သတိထား ရမည်သာ ဖြစ်သည်။
အီးယူ ဖက်ကလည်း အလားတူ ဒဏ်ခတ်လာခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတွင်းရှိ သာမန် ကုမ္ပဏီများပင် မျက်ဖြူဆိုက်လာရပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အန္တရာယ်ကင်း ဘေးကင်းဖြစ်ရန်အတွက် တဖက် ကုမ္ပဏီမှ လက်ခံမည်ဆိုလျှင် ယွမ်ငွေများသာ သုံးစွဲရပေတော့မည်။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် ငွေကုန်ကြေးကျ ခံကာ တိုင်ပင်ရပေတော့မည်။
ဤသည်က အမေရိကန်၊ အီးယူ တို့၏ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုများ မည်မျှအထိ ပြင်းထန်သည်ကို သိစေလို၍ တင်ပြရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးပိုင် နှင့် မိုင်တဲ ကို စစ်‌ခေါင်းဆောင်များ ထိန်းချုပ်ခွင်ရနေပြီး ဝင်‌ငွေများ သောက်သောက်လဲ ရရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ စစ်တန်းလျား သို့ မပြန်ဘဲ ကုပ်ကပ်နေကြမည်သာ ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် ပြည်သူများ ဖက်ကလည်း ၎င်းတို့ နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် လုပ်ငန်းများကို သပိတ်မှောက် တိုက်ပွဲ ဝင်ကြရမည်သာ ဖြစ်သည်။
(ပုံတွင် မုံရွာမြို့ လူထု အရေးတော်ပုံ လှုပ်ရှားမှုကို တွေ့နိုင်သည်)
(အချက်အလက် ကိုးကား – Irrawaddy News/ The Diplomat/ The Global Times။ မိမိ အမြင်သည် အဆိုပါ သတင်း အရင်းအမြစ်များ နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပေ)
ဆောင်းပါး – လှစိုးဝေ
လွှတ်တော်မှာ စောင့်ကြည့်ရမယ့် မျက်နှာသစ် လူငယ်အမတ်များ- ဧရာဝတီတိုင်း
How do you prepare for your dream job while working in your current job?